Isi Ahịa: Statistics, Science Olfactory, na The Industry | Martech Zone
Marketingsì Ahịa: Statistics, Science Olfactory, na The Industry
Friday, December 11, 2020 Saturday, March 6, 2021 Douglas Karr
Oge ọ bụla m si n’ụlọ m lọta, karịchaa ma ọ bụrụ na m nọrọ ọtụtụ oge n’ụzọ, ihe mbụ m na-eme bụ ịmụ kandụl. Otu n'ime ihe kachasị m mma bụ kandụl nnu nnu nnu Obi nwayọọ. A nkeji ole na ole mgbe ọkụ ya, M na-eche mara ezigbo mma na… M jụụ.
Science nke isi
Sayensị n'azụ isi bụ ihe na-adọrọ mmasị. Canmụ mmadụ pụrụ ịmata ihe ihe karịrị otu puku ijeri dị iche iche na-esi isi. Ka anyị na-eku ume, imi anyị na-achịkọta ụmụ irighiri irighiri irighiri irighiri irighiri irighiri ahịhịa ahụ ma na-agbaze n’elu obere akpụkpọ ahụ dị n’ime oghere imi anyị. Obere ajị (cilia) ọkụ dị ka irighiri akwara na-eziga n'ókè ụbụrụ anyị site na olfactory bọlbụ. Nke a na - emetụta akụkụ anọ nke ụbụrụ anyị - na - emetụta mmetụta, mkpali, na ebe nchekwa.
Nkọwapụta Sayensị Sayensị
A na-ekwenye na olu isi, ma ọ bụ nke isi, bụ echiche anyị kacha ochie, nke mepụtara.
Imi nwere 10 nde isi na-anabata ya, nke ihe dị ka ụdị 50 dị iche iche na-anabata ihe.
Kwa ụbọchị 30 ruo 60, sel gị ndị na-esi ísì ụtọ na-agbanwe.
Na-esiri ụbụrụ gị isi, ọ bụghị imi gị.
Ihe akaebe maka senti malitere na 4,000 afọ gara aga.
Androstenol bụ pheromone na mgbe ọ dị ugbu a na ọsụsọ ọhụrụ, ụmụ nwanyị nwere ike dọta mmasị ya. Mgbe ekpughere ikuku, ọ na-abanye n'ime Oyibo ma na-adighi adọrọ adọrọ (a makwaara dị ka isi anụ ahụ).
Achọpụtala na isi nke ugu na lavender na-eme ka ọbara na-eruwanye (ala ebe ahụ) n'ime ụmụ nwoke ruo 40%.
Ellssì na-akpalitekarị mmetụta uche ma na-akpali ncheta tupu a mata ha. Ha nwekwara ike ịkpalite mmetụta uche na-adịghị mma… ebe oke mmadụ bụ ndị na-arịa ọrịa nrụgide post-traumatic (PTSD).
Kedu ihe ahịa ahịa?
Entsì Marketingsì issì bụ ụdị nke mmetụta uche na-eche echiche n'echiche olfactory. Ahịa na-esi ísì ụtọ na-eweta njirimara njirimara nke ụlọ ọrụ, ahịa, ndị na-ege ntị na-ege ntị ma mepụta usoro ịtọ ụtọ nke na-eme ka ụkpụrụ ndị a kawanye elu. A na-emezu nke a site na itinye senti ahụ n'ime ụlọ ahịa ndị ahịa iji metụta omume ndị na-ere ahịa.
Dịka ọ bụla, itinye ihe ncheta n'ime njem ịzụrụ nwere ike ime ka itinye aka na ịnya ndị ahịa ma ọ bụ azụmaahịa gaa na ntụgharị. Udo, udo di uto n’ime nzuko ahia nwere ike ime ka ndi mmadu jua. A senti nke na-akpali a obi ụtọ na ebe nchekwa maka n'ji nwere ike ime ka a obi ụtọ zuo ahụmahụ.
Nke a bụ nnukwu ihe nkọwa vidiyo si na EntdịAir, onye ndu n’ire okpokoro, ndi na-agbasa ahia, na ulo oru esi esi.
Azụmaahịa nke entsì Marketingsì Ọma
Nke na-ewetara anyị ụlọ ọrụ na-esi isi ísì ụtọ. Lọ ahịa na-ere ahịa ugbu a na-etinye ego na sistemụ nnyefe nke na-akpụzi ọnọdụ ndị ahịa ma na-akpalite mmetụta, na-anya ịzụrụ ihe na iguzosi ike n'ihe ndị ahịa. Dabere na Shopify isiokwu, esi ísì ụtọ amụbaala n'ime ijeri dollar nke na-agafe ọtụtụ ụlọ ọrụ.
Otu nnyocha nke Nike mere gosiri na ịgbakwunye ihe ndị na-esi ísì ụtọ na ụlọ ahịa ha mụbara ebumnuche ịzụta site na pasent 80, ebe na nnwale ọzọ na ebe a na-ere mmanụ ụgbọ ala na mini-mart dị na ya, na-agbanye isi ísì kọfị hụrụ ịzụrụ ihe ọ theụ drinkụ ahụ 300 percent.
Thesì Azụmaahịa: Otu Companlọ Ọrụ Na-esi Na-esi ísì tore Ngwaahịa Ha
Ma lee ezigbo ihe omuma sitere na FragranceX, Etu esi edozi ozuzu ahia, gụnyere uru ahịa na-esi isi ísì ụtọ na ụdị isi na-esi ísì ụtọ na etu ndị ahịa si emeghachi omume.
Ahịa na-esi ísì ụtọ (nke a makwaara dị ka ahịa na-esi ísì ụtọ, ahịa na-esi ísì ụtọ ma ọ bụ ahịa ahịa na-esi ísì ụtọ) bụ omume nke na-esi ísì ụtọ iji mee ka ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ mara mma, melite ahụmịhe ndị ahịa na ịbawanye ahịa. Sì senti nwekwara ike ime ka ọnụọgụ ndị ahịa na-aga ahịa ma metụta oge ole ndị ahịa na-anọ n'ụlọ ahịa.
Leanna Serras, Otu esi esi nweta isi ahia
Tags: ụlọ ọrụ na-esi ísì ụtọesi ísì ụtọahụ odermgbasa ozi azụmahịaisiisiolfactionolfactoryahịa olfactorymmanu mmanuptsdísìsìesi ísì ụtọscentairkedu ihe ọ bụ ire ahịa sent
Ise Top Tips For Building A Thought Leadership Afọ Atụmatụ